I-TRF ku-Press 2020 - Umvuzo we-Reward Foundation Uthando, ucansi ne-Intanethi
Ikhaya TRF ku-Press 2020
Izintatheli zithole iReward Foundation. Basabalalisa igama ngomsebenzi wethu kufaka phakathi: izifundo zethu mayelana nobungozi bokuzitika ngokuziphatha okuyi-porn isikhathi eside; isimemo semfundo ephumelelayo, egxile ebuchosheni ezisebenza kuzo zonke izikole; isidingo sokuqeqeshwa kwabahlinzeki bezokunakekelwa kwezempilo kwe-NHS ngokulutha kwezithombe zocansi kanye negalelo lethu ku ucwaningo ekuhlukunyezweni ngokocansi okubangelwa ucansi kanye nokuphazamiseka kokuziphatha ngokocansi okuphoqelela. Leli khasi libhala ukuvela kwethu emaphephandabeni naku-inthanethi. Sithemba ukuthumela ezinye izindaba eziningi njengoba u-2020 uqhubeka.
Uma ubona udaba oluqukethe i-TRF esingayibeki, sicela usithumele inothi Mayelana nakho. Ungasebenzisa ifomu lokuxhumana ezansi kwaleli khasi.
Shayela amakhadi wesikweletu aqandiswe kumasayithi wezocansi
NguMegha Mohan, ubulili kanye nomnikazi wombhali kwa BBC News, ULwesihlanu 8 Meyi 2020
Izinkampani ezinkulu zamakhadi esikweletu kufanele zivimbele ukukhokha kumasayithi ezocansi. Lona ngumbono weqembu lomkhankaso wamazwe omhlaba kanye namaqembu omkhankaso athi asebenza ukubhekana nokuxhashazwa ngokocansi.
Incwadi ebonwe yi-BBC, esayinwe ngabasekeli abangaphezu kuka-10 namaqembu omkhankaso, ithi izingosi zezithombe ezingcolile “zivusa inkanuko yobulili, izihlobo, nobandlululo” futhi zisakaza okuqukethwe okubonisa ukuhlukunyezwa ngokocansi kwezingane nokushushumbiswa kwezocansi.
Esinye isiza esihamba phambili, i-Pornhub, sithe "le ncwadi yayingeyona nje iphutha kodwa futhi yayidukisa ngamabomu."
UMastercard utshele i-BBC ukuthi baphenya izimangalo ezenziwe kule ncwadi ezikumasayithi wezithombe zocansi futhi "bazonqamula ukuxhumana kwabo nenethiwekhi yethu" uma kuqinisekiswa ukwenza okungekho emthethweni komnikazi wekhadi.
Izinkampani ezinkulu eziyi-10 zamakhadi wesikweletu
Incwadi yathunyelwa ezinkampanini ezinkulu eziyishumi zamakhadi okuthenga ngesikweletu, okubalwa kuzo “Big Three”, Visa, MasterCard neAmerican Express. Abasayinile abavela emazweni ahlanganisa i-UK, US, India, Uganda kanye ne-Australia bacele ukuthi kumiswe ukukhokhwa ngokushesha kwezindawo ezinocansi.
Abasayine le ncwadi bahlanganisa iqembu elizimele elingenzi nzuzo iNational Center on Sexual Exploitation (NCOSE) e-US, namanye amaqembu aqondiswa ngokholo noma abesifazane nabamele amalungelo abantwana.
Le ncwadi ithi akunakwenzeka "ukwahlulela noma uqinisekise ukuvuma kunoma yimaphi amavidiyo asesayithini yabo, ingasaphathwa eyamavidiyo we-webcam aphilayo" "okwenza" amawebhusayithi ezithombe zocansi abe yisisulu sabashushumbisi bezocansi, abahlukumeza izingane, nabanye ababelana ngamavidiyo adla lubi angacabangi ".
"Kade sibona ukukhala okwandayo komhlaba wonke mayelana nokulimala kwezithombe zocansi ezabelana ngamawebhusayithi ngezindlela eziningi ezinyangeni ezisanda kwedlula," kusho uHaley McNamara, umqondisi we-UK-based International Center on Ukuxhashazwa Ngokocansi, ingalo yamazwe omhlaba yeNCOSE nokusayinwa kwencwadi.
"Emphakathini wamazwe omele izingane kanye nokulwa nokuxhashazwa ngokocansi sifuna izikhungo zezezimali ukuthi zihlaziye ngokucophelela indima yazo ekusekeleni imboni yezithombe zocansi, nokuthi zinqume ubuhlobo nazo," utshele i-BBC.
Umbiko ngesifiso samavidiyo ahlukumeza izingane kumasayithi ezithombe zocansi washicilelwa ngo-Ephreli yi-India Child Protection Fund (ICPF). Inhlangano ithe kube nokwenyuka okukhulu kwesidingo sokuseshwa kokuhlukunyezwa kwezingane eNdiya, ikakhulukazi selokhu kwavalwa i-coronavirus.
Ukuqapha ezocansi online
I-Pornhub, isayithi lokusakazwa kwezithombe zocansi elithandwa kakhulu, liqanjwe ngegama. Ngo-2019, yabhalisa ukuvakasha okungaphezulu kwezigidigidi ezingama-42, okulingana nezigidi eziyi-115 ngosuku.
I-Pornhub ibibhekwe ngonyaka odlule lapho omunye wabahlinzeki bokuqukethwe bayo - i-Girls Do Porn - eba yisihloko sophenyo lwe-FBI.
Abe-FBI bakhokhise abantu abane abasebenzela inkampani ekhiqiza inkampani eyakha umzila wokuphoqa abesifazane ukuthi benze amafilimu abonisa ezocansi ngaphansi kokuzikhohlisa. U-Pornhub ususe isiteshi i-Girls Do Porn ngokushesha nje lapho kwenziwa amacala.
Ephawula nge-BBC ngoFebhuwari maqondana naleli cala, i-Pornhub yathi inqubomgomo yayo "ukususa okuqukethwe okungagunyaziwe ngokushesha nje lapho sikwazisa, okuyikho kanye esikwenzile kuleli cala".
Ngo-Okthoba nyakenye owesilisa waseFlorida, uChristopher Johnson, wabhekana necala lokuhlukumeza ngokocansi umuntu oneminyaka eyi-30. Amavidiyo alokhu kuhlaselwa okusolwayo ayethunyelwe ku-Pornhub.
Esitatimendeni esifanayo ne-BBC ngoFebhuwari, i-Pornhub yathi inqubomgomo yayo "ukususa okuqukethwe okungagunyaziwe ngokushesha lapho sikwazisa, okuyikho kanye esikwenzile kuleli cala".
I-Internet Watch Foundation, okuyinhlangano yase-UK egxile kakhulu ekuqapheni ukuhlukunyezwa ngokocansi online - ikakhulukazi ezinganeni - iqinisekise i-BBC ukuthi izithole izehlakalo eziyi-118 zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi kanye nama-video okudlwengulwa kwabantwana ku-Pornhub phakathi kuka-2017 no-2019. Umzimba usebenza ngokubambisana namaphoyisa omhlaba wonke kanye nohulumeni ukumaka okuqukethwe okungekho emthethweni.
Esitatimendeni esithunyelwe i-BBC, okhulumela i-Pornhub uthe "bazibophezele ngokuqinile ekuqedeni nasekulweni nanoma yikuphi okuqukethwe okungekho emthethweni, kufaka phakathi izinto ezingavumelekile nezingaphansi kweminyaka. Noma ikuphi ukusikisela okuhlukile akunembile ngokweqiniso. ”
“Uhlelo lwethu lokulinganisela okuqukethwe luphambili embonini, lisebenzisa ubuchwepheshe obuhamba phambili namasu wokulinganisa enza inqubo ephelele yokuthola nokususa ipulatifomu yanoma yikuphi okuqukethwe okungekho emthethweni.
U-Pornhub uthe le ncwadi ithunyelwe izinhlangano "ezizama ukuphoqelela ukuthambekela kwabantu ocansini nokwenza kwabo izinto - akulona iqiniso kuphela kodwa futhi badukisa ngenhloso."
I-American Express ibilokhu inenqubomgomo esebenzayo kusukela ngonyaka ka-2000. Inqubomgomo ithi iyakwenqabela ukuthengiselana kokuqukethwe kwabantu abadala okwenziwa yidijithali lapho ubungozi buthathwa njengobuphakeme ngokungajwayelekile, kuvinjelwe ngokuphelele izithombe zocansi eziku-inthanethi. Engxoxweni abe nayo ne-website yakwaSmartmoney ngonyaka ka-2011, okhulumela i-American Express ngaleso sikhathi wathi lokhu kwakudalwa yizinga eliphezulu lezingxabano, kanye nesivikelo esengeziwe ekulweni nezithombe zocansi ezinganeni.
Kodwa-ke, izinhlangano zibuye zathumela izincwadi ku-American Express, ngoba zithi izinketho zokukhokha ze-American Express zinikezwe kumasayithi ezithombe zocansi - kufaka phakathi eyodwa egxile kokuqukethwe okunentsha yentsha.
Umkhulumeli we-American Express utshele i-BBC ukuthi ngenkathi inqubomgomo yomhlaba isemi, i-American Express ibinomshayeli oyinkampani eyodwa evumela ukuthi akhokhelwe amawebhusayithi athile okusakaza izithombe zocansi uma ngabe leyo nkokhelo yenziwa e-US nakwikhadi lesikweletu labathengi laseMelika.
Ezinye izinkampani ezinkulu zamakhadi wesikweletu, kufaka phakathi i-Visa ne-MasterCard, zivumela bobabili abanikazi bamakhadi esikweletu nabakwa-akhawunti ukuthi bathenge izithombe zocansi ku-inthanethi.
Kwi-imeyili eya ku-BBC, okhulumela iMastercard uthe “njengamanje baphenya izimangalo okukhulunywa ngazo kule ncwadi.
“Indlela inethiwekhi yethu esebenza ngayo ukuthi ibhange lixhuma umthengisi kunethiwekhi yethu ukwamukela ukukhokha kwamakhadi.
“Uma siqinisekisa ukwenza okungekho emthethweni noma ukwephulwa kwemithetho yethu (ngabanikazi bamakhadi), sizosebenzisana nebhange lomthengisi ukubenza bahambisane noma sinqamule ukuxhumana kwabo nenethiwekhi yethu.
"Lokhu kuyahambisana nokuthi phambilini sike sasebenza nezinhlaka zomthetho namaqembu afana neNational and International Centers for Missing and Exploited Children."
Ezinye izindlela zenziwe yizinkampani ezikhokha ku-inthanethi ukuze zihlukanise nomkhakha wezithombe zocansi.
NgoNovemba 2019, i-Paypal, inkampani ekhokha online online, yamemezela ukuthi ngeke isasekela izinkokhelo ku-Pornhub njengoba inqubomgomo yabo ikwenqabela ukuxhasa "izinto ezithile noma izinsizakalo eziqondene nezocansi".
Kubhulogi esizeni sabo, abakwa-Pornhub bathi "bakhungathekile" ngalesi sinqumo futhi lesi sinyathelo sizoshiya izinkulungwane zabamodeli nabadlali be-Pornhub abathembele ekubhaliseni kwezinsizakalo ze-premium ngaphandle kwenkokhelo.
Umuntu owenza izithombe zobulili ezingcolile owabelana ngezinto ezibonakalayo ku-Pornhub, futhi ocele ukungadalulwa, uthe ukukhokhiswa yihholo kuzoba nomthelela omubi ekutholakaleni kwakhe.
"Ngokweqiniso, kuzoba ukushaya komzimba," esho. "Bekungasula yonke imali engiyitholayo futhi bengingazi ukuthi ngizoyithola kanjani imali, ikakhulukazi manje lapho sengishiyile."
Ngemuva kwengcindezi ekhuphukayo yokuziphendulela okuningi okuvela ezingosini zezithombe zobulili ezingcolile, uSenator Ben Sasse waseNebraska uthumele incwadi eMnyangweni Wezobulungiswa eMelika ngoMashi ecela uMmeli Jikelele uWilliam Barr ukuthi aphenye i-Pornhub ngezinsolo zokusakaza nokuxhaphaza kwakhe.
Ngayo leyo nyanga, amalungu ePhalamende ayisishiyagalolunye ePhalamende abhalela uNdunankulu uJustin Trudeau efuna kwenziwe uphenyo nge-MindGeek, inkampani yabazali ye-Pornhub, enendlunkulu yayo eMontreal.
Isikhungo Somhlaba Sokuxhashazwa Ngcansi, e-UK,
Isikhungo Sikazwelonke Ngokuxhashazwa Ngcansi, i-US,
Ukumemeza Okuhlangene, e-Australia
I-European Network yabesifazane Abafudukayo, eBelgium
IZwi Lenziwe Inyama Bolivia, Bolivia
Imidiya Yezempilo Yezingane Nentsha, eDenmark
I-Apne Aap, eNdiya
Ummeli Wokusinda, e-Ireland
Inethiwekhi yase-Afrika Yokuvimbela Nokuvikelwa Ukuhlukunyezwa Kwezingane Nokunganakwa, Liberia
I-Reward Foundation, eScotland
Uhlelo Lokuqeqeshwa Kwabafana, e-Uganda